निर्मला हत्याकाण्ड : कञ्चनपुरका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख जिम्मेवारीमुक्त - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
निर्मला हत्याकाण्ड : कञ्चनपुरका सिडिओ र प्रहरी प्रमुख जिम्मेवारीमुक्त
काठमाडौं । कञ्चनपुरको आन्दोलन दवाउन गोली चलेकै दिन सरकारले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कुमारबहादुर खड्कालाई फिर्ता बोलाएको छ । उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयले तारानाथ अधिकारीलाई पठाएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रेस सहयोगी किरण भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । यस्तै सरकारले कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुखलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।
एसपी डिल्लीराज विष्टको ठाउँमा कुबेर कठायतलाई पठाइएको छ भने डीएसपी ज्ञानबहादुर क्षेत्रीको ठाउँमा कृष्णराज ओझालाई पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाले जानकारी दिएका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याबारे छानबिन गर्न सरकारले एक समिति पनि गठन गरेको छ । गृहमन्त्रालयले बिहिबार घटनाबारे छानबिन गर्न सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
यसअघि बिहीबार नै हत्याका बारेमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै प्रदेश नम्बर ७ का संघीय संसदका सांसदहरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउन नेकपाका नेताहरु लेखराज भट्ट, निरु पाल लगायतको टोली गृह मन्त्रालय पुगेको थियो । यसैबीच हत्याको विरोधमा बिहीबार कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीतर्फ ८ जना र प्रहरीतर्फ दुई जना घाइते भएका छ्न् । सो क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो । सोही गोलीकाण्डपछि सीडीओ र प्रहरी प्रमुखको फिर्ता बोलाइएका हुन् ।
घाइतेमध्ये एक जनालाई टाउकोमा चोट लागेकाले उनको अवस्था जटिल रहेको महाकाली अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डा. हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । डा. श्रेष्ठका अनुसार घाइतेहरु अधिकांशको खुट्टा र ढाडमा चोट लागेको छ । खुट्टामा गम्भीर चोट लागेका एकजनाको अञ्चल अस्पतालमा उपचार हुन नसकेर रिफर गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
सो क्रममा घाइते भएकाहरुमा आन्दोलनकारीतर्फ अर्जुन भण्डारी, तेज भट्ट, किरण पनेरु, मनोज बुढा, सन्तोष कठरिया, सञ्जय खड्का, बलदेव भट्ट, मदन साउद छन् । यी मध्ये भण्डारीको उपचार महाकाली अञ्चलल अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि धनगडी पठाइएको अस्पतालले जनाएको छ । त्यस्तै भटट्को टाउकोमा ६ टााँका लगाइएको छ ।
उता, प्रहरीतर्फ दुर्इ जना घाइते भएका छन् । हर्क पाल र महेश भटट्मध्ये पालको पनि रिफर गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । गत साउन ११ गते कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएपछि पक्राउ परेका व्यक्ति निर्दोश भएको भन्दै स्थानीयले गत चारदिनदेखि आन्दोलन चर्काउदै आएका छन् ।
सन्दीप आइपीएलमा छनोट भएसँगै यस्तो भने अस्ट्रेलियन पूर्वकप्तान माइकल क्लार्कले
काठमाडाैँ । इण्डियन प्रिमियर लिग(आइपीएल)को अक्सनमा आइतबार दिल्ली डेयरडेभिल्सले नेपाली १७ वर्षे लेग […]
नेपाल साउदी अरबसँग भिड्दै
काठमाडौँ, मलेसियामा जारी १९ वर्षमुनिका एसिसी प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गतको पाँचौँ खेलमा नेपालले […]
‘ओली-प्रचण्डबीच आलोपालोमा सहमति भएको भए पालना हुनुपर्छ’
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम […]
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले देखाए बानेश्वरमा ‘चटक’,गरे जुत्ता पालिस, अर्थ के ?
काठमाडौं । शहीद दिवसको दिन मंगलबार विहानै नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर चौकमा […]
जाडोयाममा वनभोजको चहलपहल वढे्सँगै झापाको कन्काई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गाको पर्यटकीयस्थल जमुनखाडी सिमसार […]
तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘एक घर एक करेसाबारी’ अभियान,बिरुवा निःशुल्क दिइने
स्वर्ण पदक विजेतालाई ९ लाख दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा,गौरिकालाई ११ लाख